Fanabeazana :: Noraisina ho mpiasam-panjakana ireo mpampianatra Fram efatra arivo • AoRaha
Fanabeazana Noraisina ho mpiasam-panjakana ireo mpampianatra Fram efatra arivo
Mpampianatra nokaramain’ny Fikambanan’ny ray amandrenin’ny mpianatra (FRAM) teo aloha miisa efatra arivo manerana ny faritra roa amby roapolo no nahazo fifanarahana araka asa ho an’ny mpiasam-panjakana. Nisantarana an’izany ny an’ireo mpampianatra efatra amby fitopolo sy telonjato teto amin’ny Foibem-paritra momba ny fanabeazana (Drenetp) teto Analamanga, izay natao tetsy amin’ny tokotanin’ny minisiteran’ny Fanabeazam-pirenena, fampianarana ara-teknika (Menetp) Anosy, omaly. Hanomboka, anio, kosa ny an’ny faritra hafa.
« Ezahina haparitaka manerana ny Nosy ny fandraisana mpampianatra ho mpiasam-panjakana. Hanatitra ny fifanarahana araka asa any amin’ny faritra ireo tale isan-tsokajiny. Ho tonga any am-pelatanan’ny mpampianatra rehetra, amin’ny herinandro ambony, ny taratasy fifanarahana araka asany », hoy ny minisitra Andriamanana Rijasoa Josoa.
Nahampafantarin’ity farany fa ny fandraisana mpampianatra valo arivo ho mpiasam-panjakana, amin’ity taona ity, hanampy isa an’ireto nahazo fifanarahana araka asa farany ireto. « Inoana fa hanamaivana ny fahasahiranan’izy ireo manoloana ny krizy ara-pahasalamana lalovan’ny firenena izao ezaka ataon’ny fanjakana izao », hoy ny minisitra.
Isan’ireo manampahefana nanatrika ny lanonana tetsy Anosy, omaly, ny solombavambahoakan’i Madagasikara voafidy teto an-drenivohitra, Raholdina Naivo sy ny Governoran’Analamanga, Rasoamaromaka Hery.
Fizarana tambavy :: Haparitaka amin’ny alalan’ ny Paositra Rapida ny CVO
Fiparitahan’ny valanaretina :: Tonga eny Anjanahary sy Manjakaray ny coronavirus